MW Farmaajo gudi baaris ma u magacaabi karaa dowlad Goboleedka Hirshabeele? - Muqdisho Online
Home Wararka MW Farmaajo gudi baaris ma u magacaabi karaa dowlad Goboleedka Hirshabeele?
MW Farmaajo gudi baaris ma u magacaabi karaa dowlad Goboleedka Hirshabeele?
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta magacaabay Gudi Baaris ku sameeyo qalalaasii shalay ka dhacay Gobolka Hiiraan oo ay ku dhinteen dad uu ku jiro taliyii ciidanka Booliiska. Talabada uu qaaday Farmaajo ayaa waxa ay ka soo horjeedaa dastuurka ku meel gaar ah. Farmaajo ayaa u muuqda mid ilaawsan xuduudaha awoodiisa iyo madaxbanaanida dowlad goboleedyadda.
Dowlad Goboleedka Hrshabeelle waxa ay qabtaa Gole Baarlamaan iyo xukuumad u madax banaan xal u helida dhibatooyinka ka dhex dhasha maamulka Hirshabeele. Dhibaatooyinka noocaan ah ama kuwa u dhigma waxa ay ka dhaceen deeganada Jubbaland iyo Puntland labadana marnaba iskuma dayin dowlada Dhexe in ay dhex gasho arimaha u gaarka ah dowlad goboleedyadda.
Sida uu sheegay aqoon yahan Maxamuud Culusow waa qalad in Farmaajo gudi u magacaabo Hirshabeele. Waxa uu yiri “..Waa xadgudub in Madaxweyne Farmaajo u magacaabo guddi soo baara dagaalkii ka dhacay Beledweyne oo lagu dilay taliyihii Booliska Gobolka Hiiraan laguna dhaawacay Taliyihii saldhigga Booliska Degmada Beletweyne haddii uusan Madaxweyne Hirshabelle codsan”.
Su’aasha u baahan isweydiinta ayaa ah; Farmaajo muxuu ku samaaynayaa warbixinta ay soo saaraan gudiga uu magacaabay? Ma waxa uu u kala gar qaadaayaa madaxda Hirshabeele? Mise madaxweyne Waare ayuu soo xirayaa?, hadii gudiga loo diido in ay tagaan Hirshabeele muxuu sameeynayaa?
Madaxweyne Waare ayaa maanta ku noqday magaalada Baladweyne si uu xal deg deg ah ugu helo qalaalsaha siyaasadeed ee ka jira Gobolka Hiiraan.
Previous articleMW Saciid Deni iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan albaabada u xiran yihiin ku yeeshay Addis Ababa
Next articleMadaxweyne Waare oo sheegay in la soo qabtay dadkii dilay taliyihii Booliska Qaybta